ထရိတ်ဒါတို့အကြိုက် ကားအမျိုးအစားကို ကြည့်လိုက်ပါ
လာမည့်ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်အတွက် အကောင်းဆုံးကားကို မဲပေးရွေးချယ်မှု အစီအစဉ် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ, ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြသည့်ကားမှာ Lexus RX200t ဖြစ်ပါသည်!
ထောင်သောင်းချီသည့် ဖောက်သည်များက ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဆိုဒ်တွင် အကောင်းစားကား ၅မျိုးကို ၀င်ရောက် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာ မြင်ရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ အံ့သြ၀မ်းသာမိပါသည်! ကားတိုင်းက ဆုချီးမြှင့်ပေးရန် ထိုက်တန်ပါသည်. သို့ရာတွင် ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုချီးမြှင့်ပေးရမည့် ကားအမျိုးအစားကိုတော့ Lexus RX200tကို တခဲနက် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါသည်.
ယခုအခါမှာ ဆုလက်ဆောင်ကို သတ်မှတ်ပြီးသည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းတွင် မြန်မြန်ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး အကောင်းစားကားသစ်ကြီး Lexusကို ရယူပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက မနာလိုအားကျရတဲ့အထိဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ!
ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကာ FBSနှင့်အတူ ကံကောင်းခြင်းများကို ရယူလိုက်ပါ!